घोराही–५ मा दुई सय बढी कांग्रेसमा प्रवेश « Farakkon
दाङ, ८ माघ । घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. ५ मा नेकपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी परित्याग गरी दुई सय बढी नेता तथा कार्यकर्ताहरु नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् । सरकारको असंवैधानिक कदम विरुद्ध केन्द्रीय पार्टीको निर्देशन अनुसार नेपाली कांग्रेस घोराही उपमहानगरपालिका ५ इकाइ समितिले बसन्तापुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरु प्रवेश गरेका हुन ।
नवप्रवेशीहरुलाई नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा संविधानसभा सदस्य योगेन्द्र चौधरीले अविर टिकासहित पार्टीको सदस्यता दिएर पार्टी प्रवेश गराएका थिए । पार्टी प्रवेश गराउँदै केन्द्रीय सदस्य चौधरीले सरकारको असंवैधानिक कदमका लाग्न उनीहरुलाई आग्रह गरका थिए । बर्तमान सरकारका कारण संविधानको चिरहरण गर्ने काम भएको भन्दै केन्द्रीय सदस्य चौधरीले यसका विरुद्ध लोकतन्त्रवादीहरु एकजुट हुन आवश्यक रहेको समेत बताएका थिए ।
कार्यक्रममा नेकपा पाटी परित्याग गरी डम्वर नेपाली, कुलबहादुुर विक, हिरा विक, गजेन्द्र नेपाली, सुवोध विक, जयराम विक, सेतु नेपाली, बालाराम नेपाली, बाबुलाल बुढा, गोविन्द नेपाली, श्यामकुमार नेपाली,जीवन नेपाली, राजकुमार चौधरी, भीमबहादुर वली,प्रेमबहादुर रेउले, राप्रपाका इकाइ सचिव निर्मला डाँगीलगायतका दुई सय ५० जना प्रवेश गरेका थिए ।
नेपाली कांग्रेस घोराही उपमहानगरपालिका ५ का इकाइ सभापति बिष्णमुणि दाहालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नं. १ का सभापति भेषराज पाण्डेय, नेपाली कांग्रेसका नेता नेमकान्त दाहाल गुरु, कांग्रेसका जिल्ला सदस्य अर्जुनकुमार योगी, पूर्व जिल्ला सदस्य कृष्णबहादुर गिरी, पुर्व महाधिवेशन प्रतिनिधि खड्गबहादुर विक, जिल्ला समन्वय समिति सदस्य लोकी विश्वकर्मा, नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य पवन नेपाली, नेपाल दलित संघका उपाध्यक्ष प्रकाश नेपाली, नेपाली कांग्रेसका क्षेत्रीय प्रतिनिधि गोपाल नेपाली, नेपाल दलित संघ दाङका सचिव शम्शेर नेपालीलगायतले सरकारको गलत कदमका विरुद्ध जनतालाई विराधमा लाग्न आग्रह गरेका थिए ।
कोषाध्यक्ष तिलविक्रम पछाईको स्वागत मन्तव्यवाट सुरभएको कार्यक्रमको सहजीकरण सचिव सुशील बस्नेतले गरेका थिए ।